Tigrisy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Tigra (ony))
I Togrisy na Tigra dia renirano ao Mesopotamia izay mahatratra 1900 km. Any Torkia no ipoiran'ny loharanon'i Tigrisy miaraka amin'ny loharanon'i Eofrata.
Ny reniranon'i Tigrisy sy Eofrata
Avy ao amin'ny tangoron-tendrombohitra Taurus no ipoiran'i Tigrisy avy eo mamakivaky an'i Siria sy Iràka hatrany avaratra ka hatrany atsimo mandalo an'i Mossoul sy i Bagdada. Avy eo mihaona amin'i Eofrata sady mitambatra ao amin'ny sampan'ny vinanindrano atao hoe Chatt-el-Arab izay mahatratra 200 km, sady mivarina any amin'ny Helodrano Persika.
Sahala amin'i Eofrata izy ka mamakivaky an'i Iràka ao amin'ny faritra efitra ary ny famatsina rano azy dia miankina amin'ny tendrombohitra any amin'ny tany hafa. Miankina amin'ny fitsoniky ny ranomandry ny habetsahan'ny ranony, ka miovaova izany, nefa voafetra ny fandrahan'ny ranony noho ny fisian'ny tohodrano maro. Ny tohodranon'i Samara dia mampitodika ny rano tsy lany rehefa amin'ny fotoana mahabe azy mankany alin'ny lempon'i Tharthar ao amin'ny faritra ivan'i Djezireh. Avy eo dia misy lakandrano ahafahan'ny rano mivarina any amin'i Eofrata ka manabe ny ranon'i Eofrata. Fohy kokoa noho i Eofrata i Tigrisy nefa izy no manome ny ankabetsahan'ny rano manondraka an'i Iràka (47 hatramin'ny 50 km2). Ny rano madinika manompo azy dia avy eny amin'ny tendrombohitra Zagros sy tendrombohitra maro ao Iràna izay mivarina amin'ny ilany ankaviany.
Ny renirano Tigrisy ao Bagdada
Ao amin'ny ilany ankavanana dia manakaiky dia manakaiky an'i Eofrata izy avy eo amin'ny faritr'i Bagdada.
Rehefa tonga any amin'ny faritra iva kokoa izy dia ahitana honahona maro miforona izay miparitala amin'ny halavana mirefy 12000 km eo anelanelan'i Tigrisy sy i Eofrata. Ireo honahona ireo dia miharitra noho ny hamaron'ny fanamboarana tohadrano maro amin'ireo renirano roa ireo sy ny fitarihan-drano be loatra, nefa noho ny ady tao Iràka tamin'ny taona 2003 dia nanimba fefiloha, ka nahatonga ny 40%n'ny honahoha ho velona indray.
Ny renirano Tigrisy dia miteraka disadisa eo amin'i Iràka sy i Torkia satria i Torkia dia manamboatra tohadrano maro loatra izay mampihena ny ranon'i Tigrisy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigrisy&oldid=970409"
Dernière modification le 23 Aprily 2019, à 11:15
Voaova farany tamin'ny 23 Aprily 2019 amin'ny 11:15 ity pejy ity.